निरभ मोदीको नक्कली हिराले गुमेको दुई लाख अमेरिकी डलर र प्रेमिका
एससीएमपी October 7, 2018
यो वर्षको जुनमा ३६ वर्षिय पल अल्फोन्सो र उनकी प्रेमिका, पेकिङ डकका लागि प्रख्यात एउटा चीनियाँ फाइन-डाइनिङ रेस्टुरेन्ट, छाङ आनमा रात्रीभोजपछि कार चलाएर भ्यान्कुभरको स्ट्यान्ली पार्क गए ।
टहलिन लोभ्याउने त्यो रात एकदमै शान्त र न्यानो थियो । अल्फोन्सोले ब्रोक्टन प्वाईन्ट लाईटहाउस नजिकै कार रोके । उनीहरु दुवैको जीवन परिवर्तन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नलाई उनी आँट बटुल्दै थिए ।
“म एकदम आत्तिएको थिएँ । करिब १० मिनेट जति कुरा गरेपछि, मैले औंठी निकालें र उनलाई बिहेको प्रस्ताव राखें…उनी छक्क परिन्,” उनी सम्झन्छन् । उनकी प्रेमिकाले प्रस्ताव स्वीकारिन् ।
त्यो औंठी निरभ मोदीबाट खरिद गरिएको थियो । मोदी हिराका गरगहनाहरुको प्रख्यात डिजाईनर हुन् जसको डिजाईन केट विन्स्लेट र डकोटा जोन्सनजस्ता लोकप्रिय हलिवुड स्टारले लगाएका छन् । तर मोदी भारतको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो बैंक ठगी काण्डको केन्द्रमा पनि छन् भन्ने अल्फोन्सोलाई थाहै थिएन ।
क्यानडाली नागरिक अल्फोन्सो एउटा पेमेन्ट प्रोसेसिङ कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख हुन् । उनी धेरै जसो समय भ्यान्कुभर र क्यालिफोर्नियामा बिताउँछन् । उनले मोदीलाई सन् २०१२ मा प्रतिष्ठित बेभर्ली हिल्स होटेलको शताब्दी उत्सवमा भेटेका थिए । त्यसको केही महिनापछि, उनीहरुको भेट मालिबुको एउटा कार्यक्रममा भयो । अर्को साता उनीहरुले न्युयोर्कको म्यान्डरिन ओरियन्टलमा सँगै रात्रीभोज खाए ।
“मलाई उनले विश्वभरी नै निरभ भोदी बुटिक खोल्ने योजना सुनाए,” अल्फोन्सोले भने,”म करिब १० वर्ष कान्छो हुँ, त्यसैले पनि उनले मलाई दाजुजस्तो सल्लाह दिए…उनी यति उचाईंसम्म कसरी पुगे आदि कुरा भयो ।”
मोदी हिराको कारोबार गर्ने परिवारमा जन्मिएका हुन्, तर उनले हिराको गहना डिजाईन गर्ने क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य बनाए । सन् १९९९ मा, उनले फायरस्टार डायमन्ड स्थापना गरे । पहिले उनी खुला हिराको कारोबार गर्थे । पछि उनले विश्वभरका खुद्रा बिक्रेताका लागि ज्वेलरी बनाउन थाले । सन् २०१० देखि न्युयोर्क, लन्डन, हङकङ र मकाउमा आफ्नै नामको ब्रान्ड स्थापना गरेर मोदीले व्यापार गर्न थाले ।
“भेट्दा उनी एक प्रतिष्ठित व्यक्तिजस्तो देखिन्थे…हामी अन्य मानिसहरु पनि भेट्थ्यौं र सबैले उनलाई चिन्थे । एक तरिकाले, म उनको प्रशंसा र सम्मान गर्थें,” अल्फोन्सोले भने ।
सँगै खाना खाएको र आफ्नो नीजि जीवनबारे कुरा गरेको व्यक्ति भारत सरकारले सञ्चालन गरेको पञ्जाब नेशनल बैंकको २ अर्ब अमेरिकी डलर ठगी काण्डका मुख्य आरोपी होलान् भनेर उनले सोंचेका पनि थिएनन् । मोदीसँगको मित्रताले नीजि जीवनमा पार्ने प्रभावबारे अल्फोन्सोले कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् ।
“उनी एकदमै उत्साही, अत्यन्तै फरासिला थिए, मैले उनीबाट केही नकारात्मक भाव पाईनँ । उनी एकदमै विश्वसनीय र व्यावहारिक व्यक्तिजस्तो देखिन्थे,” उनले भने । “उनीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको मलाई अनुभव हुन्थ्यो ।”
उनीहरु केही वर्ष सम्पर्क विहीन रहे । तर यो अप्रिलमा, उनले मोदीलाई एउटा ईमेल लेखे : “म ईङ्गेज्मेन्ट रिङ खोज्न बजारमा छु । म मेरी प्रेमिकासमक्ष बिहेको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु र मलाई केही विशेष चाहिएको छ ।”
तर हिराका व्यापारी मोदीलाई प्रहरीले खोजीरहेको भन्ने अल्फोन्सोलाई थाहापत्तो थिएन । जनवरीमा, पञ्जाब नेशनल बैंकले मोदी र उनको काका मेहुल चौक्सी विरुद्ध प्रहरीमा ठगी गरेको उजुरी गरेको थियो । त्यही महिना भारत छोडेको विश्वास गरिएका मोदी विरुद्धको मुद्दा भारतको सञ्चार माध्यममा डढेलोसरी सल्किए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा खासै आएन । त्यही समयमा, उनी मकाउ र क्वालालम्पुर लगायतका स्थानमा पसलहरु खोल्दै थिए । मोदी हङकङमा रहेको विश्वास गरी सम्बन्धित भारतीय निकायले अप्रिल महिनामा शहरको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस्मा उनको गिरफ्तारीको अनुरोध पठायो ।
अघिल्लो महिनाको ईमेलमा, अल्फोन्सोले आफैं औंठीको डिजाईन गर्न चाहेको बताए । “मेरो बजेट एक लाख अमेरिकी डलर छ । तपाईंले केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि ?
मोदीले सोही दिन प्रत्युत्तर पठाए : “तपाईंको सपनाको ईन्गेज्मेन्ट रिङ सिर्जना गर्न सहयोग गर्नु मेरो अहोभाग्य हो…पल, मसँग तपाईंको लागि एकदमै उपयुक्त हिरा छ ।”
उनले अल्फोन्सोलाई ३.२ क्यारेटको गोलो उत्कृष्ट डायमन्ड कट भएको, डी रंगको, भीभीएस१ – एकदमै उच्च श्रेणीको गुणस्तर र रंगविहीन पत्थर प्रस्ताव गरे । “म तपाईंलाई यो होलसेलमा १ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा दिनसक्छु । यो एकदमै सुन्दर हिरा हो…यो तपाईंको उत्कृष्ट छनोट हुनेछ ।”
अल्फोन्सोले सहमति जनाए र त्यो औंठी चाँडोभन्दा चाँडो दिन चाहेको बताए । मोदीले दुई साताको समय मागे । मोदीले आफ्नो मास्टर ज्वेलरले हिरा भएको स्थान हङकङमा औंठी बनाउने बताए । “मेरा सहायक अरिले तपाईंसँग चाँडैं सम्पर्क गर्नेछन्,” मोदीले लेखे । “एउटा पुरुषको जीवनमा सबैभन्दा अर्थपूर्ण खरिदको समयमा मलाई सम्झनु भएकोमा धन्यवाद ।”
सबै कुरा योजना अनुसार नै अघि बढ्दै थियो । तर अल्फोन्सोकी प्रेमिकाले कुनै पत्रिकामा छापिएको भिन्दै डिजाईन मनपराएपछि उनले दोश्रो औंठी पनि अर्डर गरे । “म कुनै कमीकमजोरी नहोस् भन्ने चाहन्थे, त्यसैले मैले निरभलाई सम्पर्क गरें,” उनी भन्छन् । “पछि हाम्रो दशौं वार्षिकोत्सवमा, पहिले बनाउन दिएको औंठी उपहार दिउँला भन्ने विचार गरें ।”
मोदीले अल्फोन्सोलाई २.५ क्यारेटको अण्डाकारको हिरा ८० हजार अमेरिकी डलरमा प्रस्ताव गरे । अल्फोन्सोले दुवै औंठीको पैसा हङकङको एउटा खातामा पठाए । चाँडै नै बिल र प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र पाउने आश्वासन सहित औंठी लिएर, जुन १७ मा अरि आफैं भ्यानकुभर पुगे ।
सोही दिन, हिराहरु “असाध्यै सुन्दर” भएको उल्लेख गर्दै प्रमाणीकरण प्रमाणपत्रहरु कुरियर गरिदिन भन्दै अल्फोन्सोले मोदीलाई ईमेल लेखे । मोदीले पनि तुरुन्तै जवाफ दिए : “धन्यावाद । तपाईंले हिरा मनपराएकोमा मलाई खुशी लाग्यो । प्रमाणपत्रहरु डीएचएल मार्फत् म तपाईंको घरमा पठाउनेछु ।”
यसैबीच, अल्फोन्सोले प्रेमिकालाई प्रस्ताव गरे; भावनामा बगेर उनले एउटा होईन दुवै औंठी दिए । “शुरुमा मैले उनलाई एउटा मात्रै औंठी दिएँ । र त्यसपछि, खै किन हो, मन थाम्नै सकिनँ…म आफु कति गम्भिर छु भन्ने उनलाई देखाउन चाहन्थें र म उनलाई साँच्चिकै विवाह गर्न चाहन्छु भनेर भन्न खोजीरहेको थिएँ ।”
अल्फोन्सो र उनकी भावी पत्निको खुट्टा भुईंमै थिएन, तर प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र आईपुगेको थिएन । “उनी व्यस्त भए र बिर्से होलान् भन्ने सोचें…तर अर्को साता पनि बित्यो, केही आएन । मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्न थाल्यो,” उनले भने ।
त्यसपछि, थुप्रै ईमेल आदानप्रदान भए । मोदीले प्रमाणपत्र आउँदै गरेको आश्वासन दिईरहे ।
“म दुवै औंठीको बिमा गर्न चाहन्थें किनभने औंठीहरु एकदमै महँगा थिए । त्यसका लागि, औंठीको प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक थियो । मेरी मंगेतर आफैं ती औंठीहरुको प्रमाणीकरण गर्न गईन्,” अल्फोन्सोले बताए ।
त्यतिबेला पो छाँगाबाट खसे । यो अगष्टको प्रारम्भको कुरा हो । ती सुन्दर पत्थरहरु त नक्कली पो रहेछन् !
“उनले मलाई त्यो कुरा सुनाउँदा, ‘यो हुन सक्दैन । मैले ती औंठीका लागि दुई लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेको छु त्यो नक्कली हुनै सक्दैन । निरभ मोदी पो त’ भन्ने सोंचीरहेको थिएँ,” अविश्वासपूर्वक अल्फोन्सोले भने ।
त्यसपछि, मोदीबारे ताजा समाचार पढ्न थालेपछि उनलाई अर्को धक्का लाग्यो । फोर्ब्सले उनलाई १ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर सम्पत्ति भएको भारतको ८४औं धनी व्यक्ति भनेर अघिल्लो वर्ष सूचीकृत गरेको थियो ।
“मैले त बल्ल पो बुझें : ‘हे भगवान्, यो मान्छे त भारतको बैंक ठगी काण्डमा प्रहरीको खोजीमा रहेको, र उनको न्युयोर्कस्थित दुई कम्पनीले टाट पल्टिएको घोषणा गरेको रहेछʼ… त्यति बेला मात्रै,आफु ठगिएको चाल पाएँ ।”
विश्वास नलागेर अल्फोन्सोले समाचार खोज्दै गए । “यति ठूलो कारोबार गर्दा म सधैं सावधान रहन्छु, तर यो पटक, यिनी निरभ हुन् । उनी आफैं करोडौं सम्पत्तिका मालिक छन् । मबाट एकाध लाख ठगी गर्लान् भनेर कल्पनासम्म पनि गरिनँ ।”
उनको सपना भताभुङ्ग हुन थाल्यो । “यसले मेरो पूर्व मंगेतर र उनको परिवारको सम्बधमा प्रभाव पार्‍यो । उनीहरुले मैले यो नक्कली औंठी किनेर उनलाई प्रस्ताव गरेको भन्ने सोंच्छन्,” उनले भने ।
“त्यसको एक वा दुई दिनमै हामी छुट्टियौं…हामी दुवैका लागि यो सम्हाल्नै नसकिने भएको थियो । उनी भन्थिन् : तिमी स्मार्ट छौं । तर कुनै कारोबार बैधानिक भए-नभएको सुनिश्चित नगरी तिमीबाट कसरी दुई लाख अमेरिकी डलर ठगी गर्नसक्छ ? उनी आफैं छक्क पर्छिन् ।”
ओरालो लागेको जिन्दगी
दुई हिरा नक्कली भएको थाहा पाएदेखि अल्फोन्सो आफुलाई डिप्रेसन भएको बताउँछन् । “त्यसपछि, मैले काम गर्न सकिनँ,” उनले भने,”म यो मान्छेको पछि लागें भने पनि, मभन्दा अघि पैसा फिर्ता लिन बसेका धेरै मान्छे छन् भन्ने बुझें ।”
यसले उनको कारोबारमा पनि असर पुर्‍यायो किनभने उनको ध्यान न्याय पाउन मै बढी केन्द्रित हुन्थ्यो । “यो मान्छेलाई कसरी पत्ता लगाउने र क्षतिपूर्ति लिने भनेर मैले बितेका केही साता, प्रत्येक दिन बिताएको छु ।”
अल्फोन्सोले अगष्ट १३ को ईमेलमा मोदी विरुद्ध आक्रोश पोखे, तर त्यसपछि उनी सम्पर्कमै आएनन् । “तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले मलाई र अब मेरी पूर्व मंगेतरलाई कति चोट पुर्‍याउनु भएको छ ?…तपाईंले मेरो र उनीबीचको यति सुमधुर सम्बन्ध बर्बाद गरिदिनुभयो । मेरो जीवन बर्बाद गरिदिनुभयो,” उनले लेखेका छन् ।
अल्फोन्सोले न्युयोर्क र भ्यान्कुभरको प्रहरीमा उजुरी गरेको बताए । यसैबीच, मोदी विरुद्ध सुपेरियर कोर्ट अफ क्यालिफोर्नियामा अनलिमिटेड सिभिल लशुट दर्ता गरेर अल्फोन्सोले ४२ लाख अमेरिकी डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गरेका छन् । यसमा औंठीको दुई लाख, दण्डात्मक क्षति वापत १० लाख र भावनात्मक दुख, पीडा र कष्टका लागि थप ३० लाख अमेरिकी डलर समावेश गरिएको छ । जनवरी ११, २०१९ मा एउटा केस म्यानेजमेन्ट कन्फरेन्स गर्ने तय गरिएको छ ।
“क्यालिफोर्नियामा मैले दर्ता गरेको मुद्दामा अमेरिकास्थित उनको दुई कम्पनी उल्लेख गरिएका छन् । ती दुवैले टाट पल्टिएको घोषणा गरेका छन् । ती कम्पनीबाट केहि पाउँछु कि भन्ने आशा छ,” अल्फोन्सोले भने ।
गत जुनमा, फाइनान्सियल टाईम्सले बेलायत र भारतका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै राजनीतिक उत्पीडन भएकोले मोदीले बेलायतमा शरण मागेको बताएको थियो । आफु निर्दोष रहेको मोदीले बताउँदै आएका छन् । त्यसको एक महिनापछि, ईन्टरपोलले उनलाई पक्राउ गर्न सूचना जारी गर्‍यो । त्यसयता भारतीय अधिकारीहरुले मोदीलाई स्वेदश फिर्ता गराउन बेलायतलाई अनुरोध गरेका छन् साथै अमेरिका र बेलायत लगायत चार देशमा रहेको उनको सम्पत्ति पनि जफत गरेका छन् ।
दिस विक इन एशियाले मोदी र उनको सहयोगी अरिलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर टेलिफोन र ईमेलको कुनै उत्तर आएन ।
यसैबीच, आफ्नो मुद्दा समाधान हुन वर्षौं लाग्न सक्नेबारे अल्फोन्सोलाई राम्ररी थाहा छ ।
“यो व्यक्ति विश्वास गर्न लायक नभएको मानिसहरुले थाहा पाउन्…मैले उसलाई साथी मानेको थिएँ । उसले मलाई यस्तो गर्‍यो भनेर मैले विश्वास गर्नै सकेको छैन,” उनले भने, “उसले बैंकबाट मात्र चोरी गर्दैन । उसले तपाईंबाट पनि चोरी गर्नेछन् किनभने उसको सम्पत्ति सबै स्वाहा भएको छ ।”